मलेसिया सरकारले तोक्यो कामदारको शुल्क, अबदेखि RM 1136 लाग्ने ! - jagritikhabar.com
मलेसिया सरकारले तोक्यो कामदारको शुल्क, अबदेखि RM 1136 लाग्ने !
मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार (पीआरए) भर्नाका लागि रोजगारदातालाई लिने शुल्क १ हजार १३६ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दातुक सेरी खैरुल जाइमी दाउदले उक्त रकममा लेभी भुक्तानी दर, देशअनुसार भिसा, प्रशोधन शुल्क, पास शुल्क, जमानतको रकम र अन्य सम्बन्धित शुल्कहरू समावेश गरिएको बताए।
“प्रत्येक PRA सेवनले उमेर, लिङ्ग जस्ता उल्लिखित योग्यता आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ र देशमा आइपुगेपछि FOMEMA द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पास गर्नुपर्छ।
“डिसेम्बर 31 सम्म, मलेशियन अध्यागमन विभाग (JIM) ले अस्थायी वर्किङ भिजिट पासहरू (PLKS) भएका जम्मा ८८,१७३ PRA हरू रेकर्ड गरेको छ,” उनले भने।
उनले भने, रोजगारदाताहरूले PRA आवेदन प्रक्रियाका साथै विभागको आधिकारिक पोर्टल www.imi.gov.my वा JIM को आधिकारिक सोशल मिडिया ब्राउजिङसँग सम्बन्धित अन्य जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्।